About Us - Changzhou longxin Makiinado Co., Ltd
afku Successful ee shirkadaha dawladdu leedahay.
Kordhinta caasimada iyo Longxin Makiinado Co., Ltd waxaa la aasaasay.
Longxin Haydarooliga Saddex Mill duuban waxaa la soo saaray.
Longxin CNC Saddex rullaluistemadka Mill iyo kuusha Mill lagu soosaaray.
Longxin High nafwaayay kuusha Mill loo sameeyay.
Longxin ayaa loo doortay guddoomiye ku-xigeenka unit of Chinese khad Association.
Longxin kuusha Mill helay tiro ka mid ah shatiyada qaranka.
Yearly qiimaha wax soo saarka ka badan 60 million oo mishiino silikoon laan la aasaasay.
Longxin waxaa awood u leeyihiin inay noqon technology budada Ultra-wanaagsan cilmi xarunta Gaarka Qaranka.
Longxin waxaa oggolaaday in ay ganacsi High-tech.
Longxin sii wadaan in uu horay u socdo, oo gaarey weyn ee mustaqbalka.
Mabda 'oo siman ah: Tayada First, Adeega ugu wanaagsan, qanaca Customer
upmost Macaamiisha, Adeega ugu wanaagsan
shaqaale kasta oo Longxin daweeyo macaamiisha leh dabeecad halis ah oo mas'uul ah, u hoggaansanaayeen fikradda adeegidda "qaadashada macaamiisha xarunta iyo qaadashada baahida sida hagaha", laga bilaabo baahida macaamiisha ah ee, sarraysa macaamiisha ah ee rajada, iyo ugu dambeyntii ku qanacsanaanta macaamiisha ah ee . Ha macaamiisha kasta oo dareen daacad ka ah pre-sale in ka dib-sale.
Kooxda Professional, Nuuxnuuxsiga shiidi Technology
Longxin leedahay taariikh ah oo ka badan 20 sano. In this 20 sano, waxaan lagu diiradda saaraya mid ka mid ah wax soo saara qalabka darane heerka koowaad. Under hoggaanka wax soo saarka sare iyo R & D injineerada, waxaan ku dhisay koox soo saarka iyo horumarinta xirfadeed, dhigin aasaaska ka-adag ee koritaanka ganacsiga darane our.
Innovation aan dhammaadka lahayn, hay Fulitaanka
Longxin leh xaaladda kala duwan sharaf, oo ay ku jiraan ganacsi farsmada heerka sare, technology qaranka budada aalladda ganaax gaar ah xarunta cilmi baarista, wax micro-Nano diyaarinta danbeeyay iyo goobta imtixaanka warshadaha. Iyada oo aannu horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo, Longxin ayaa aqoonsan macaamiisheena iyo sumcad sare. Waxaan sii wadi doonaa in la dhiso noo brand iyo ballaariyo our hal-abuurnimo.